I-Realme Watch 2, indlela esezingeni eliphansi yokungena esezingeni lokugqoka | Izindaba zegajethi
UMiguel Hernandez | 06/07/2021 13:00 | Gadgets, General, Izibuyekezo, SmartWatch
Realme iyaqhubeka nokubheja ngokunikela ngenani elilungisiwe lemali kumadivayisi alo futhi imelana noXiaomi endaweni lapho bekubonakala sengathi iphethe yodwa. Njengembangi yayo, iRealme ibilokhu ingena ebangeni lemikhiqizo ehlukahlukene kakhulu, futhi amawashi bekungeke kube okuhlukile.
Sibheka ngokujulile iRealme Watch 2 entsha, inguqulo eshibhe kunayo yonke yewashi leRealme ukuheha abasebenzisi ekugqokeni kwayo kokuqala. Zitholele nathi ulwazi esibe nalo maqondana newashi lenkampani yase-Asia futhi uma kuwufanele ngempela ngezindleko zalo eziphansi.
Njengenjwayelo, sikuphelezele lokhu kuhlaziywa nevidiyo encane evela esiteshini sethu se YouTube, kuyo uzokwazi ukwazisa ukungabikho okuphelele kwebhokisi le- I-Realme Watch 2 kanye nezinyathelo zokuqala nezilula zokumisa. Thatha ithuba ubhalisele isiteshi sethu YouTube ngoba ngaleyo ndlela ungasisiza ukuthi siqhubeke nokukhula futhi sikulethele ukuhlaziywa okuthembeke kakhulu kuwebhu. Uma uyithandile, intengo e-Amazon iphansi kakhulu kangangokuthi izokumangaza.
1 Idizayini: Isongo ebelifuna ukuba yiwashi elihlakaniphile
2 Ukuxhumana nezinzwa
3 Isikrini nokuzimela
4 Sebenzisa isipiliyoni
Idizayini: Isongo ebelifuna ukuba yiwashi elihlakaniphile
Mayelana nokwenziwa, siyamangala ngokukhanya okuthe xaxa kwale Realme Watch, yakhiwe ngopulasitiki "wejet black", uhlobo olukhanga ngokukhethekile imihuzuko. Ngokubukeka iwashi, elinomumo wendabuko nosayizi wokuthi iyini i-smartwatch, kodwa-ke, uma nje siyivula siyabona ukuthi ingaphambili liyi-bezel, ngilinganisela ukuthi cishe u-35% uma kungenjalo, futhi lokho kungenxa yepaneli yayo encane engu-1,4-intshi yobukhulu be- Amamilimitha ayi-257.6 x 35.7 x 12.2. Njengoba sishilo, isisindo siphansi ngokumangazayo, amagremu ayi-38 kuphela lokho kukwenza uzizwe, isitayela seNed Flanders, sengathi awugqokile.
Inenkinobho eyodwa yohlangothi eyenziwe ngepulasitiki ehlukile, ngomzila owanele wokusetshenziswa kwendabuko futhi osebenzela ukwehlisa izifiso zethu.
Sinesikhundla esisodwa sokushaja sikazibuthe, Ngezikhonkwane ezimbili zensimbi, isebenza kahle futhi inobude obanele. Inentambo engama-millimeter angama-22 eyenziwe nge-silicone enokuvalwa okungajwayelekile. Isilinganiso sanele futhi songa onodoli abaningi, yize ukuqina kwaso kungadala ukuthi usiqinise ngaphezu kwesidingo ngephutha, njengoba kwenzekile kithina. Ibhande elingaphandle komgwaqo lokusetshenziswa njalo ene "hook" yendawo yonke, ngokomthetho sizokwazi ukubeka cishe leyo esiyifunayo, yize iRealme iqinisekile ukuthi izokwethula imichilo ehlukile kuyo yonke impilo yosizo yedivayisi.
I-Realme ayenzanga idatha yomphakathi maqondana neprosesa, i-RAM kanye nokugcinwa kwaleRealme Watch. Ngokuphathelene nokugcina, sicabanga ukuthi kwanele nje ukuba nemikhakha ehlukene eyenziwe ngokwezifiso, okungenani kucatshangelwa ukuthi ukuphathwa kokuqukethwe kwe-multimedia kukhawulelwe kurimothi yeselula ehambisanayo. Kukho konke lokhu, kuyasetshenziswa I-Bluetooth 5.0 ngoxhumano olulula nge I-Realme Link, esiyikhumbulayo, iyahambisana ne-Android ne-iOS.
Ine- ama-accelerometer amathathu we-eksisi ukubala ukunyakaza kahle nokuqapha ukusebenza kwethu njengokuqedisisa ngangokunokwenzeka. Sine ngesikhathi esifanayo zakudala inzwa yokushaya kwenhliziyo futhi kugcwaliswa ngu- a inzwa yokugcwalisa i-oxygen egazini ejwayelekile kulezi zinsuku. Ambalwa amakhono esingawasho, asinayo i-WiFi noma i-GPS, kusobala ukuthi siyakhohlwa nge-LTE noma obunye ubuchwepheshe obungenantambo, kepha-ke, sikhuluma ngedivayisi Inani lalo elihlekisayo, Akekho umuntu ongakubuza ngokuphelele okungaphezu kwalokho onakho esigabeni sobuchwepheshe. Kubalulekile ukusho ukuthi umfowabo "Pro" uyakwazi i-GPS geopositioning uqobo.
Sithole iphaneli le-de Amasentimitha angu-1,4, anikela ngokulungiswa okuphelele kwamaphikseli angama-320 x 320, okungukuthi, ukuminyana kwamaphikseli angama-323 nge-intshi ngayinye. Kuyamangaza ukuthi isixazululo sibe ngaphansi kancane kunaleso somfowethu "Pro", sinikeza ubukhulu be-pixel ephakeme kakhulu kunaleyo "ebizayo" inguqulo yedivayisi. Isikrini sinikeza izilungiselelo zokukhanya ezahlukahlukene kwephaneli laso le-LCD, izivivinyo zethu zibonise ngaphezu kokwanele Ngokusetshenziswa kwangaphandle kwazo zonke izinhlobo, ukuzivikela kahle zombili lapho kukhonjiswa okuqukethwe nalapho kuxhumana nakho, kuphendula kahle ekuhlanganyeleni komzimba.
Ngokuqondene nebhethri, sine-315 mAh enikeza isikhathi sokuphumula ngokwethiyori ngokusho kweRealme yezinsuku eziyi-12, ezivivinyweni zethu sesifikile osukwini lweshumi ngaphandle kwezinkinga, Yize amazinga angathembiswanga ngumkhiqizo engafinyelelwanga, ahlala asondele impela, kuzoncika ekusetshenzisweni okwenziwe yile divayisi ngumsebenzisi ngamunye. Imali ekhokhwayo egcwele izosithatha isikhathi esingaphezu kwehora.
Sithole umshini onemisebenzi eyisisekelo emakwe kahle, noma ngabe une-smartwatch esithuthukile uzokwazi ukuthi i-90% yalokho okusebenzisayo ikulokhu I-Realme Watch 2, yize ulwazi, yebo, lubiza kancane. Sinohlelo lokubikezela isimo sezulu, izinhlobo ezingaphezu kuka-90 zokuqeqeshwa kanye nezinyathelo eziyisisekelo zokuqapha ezemidlalo njalo, konke lokhu kuboniswa ku- Isixhumanisi seRealme, uhlelo lokusebenza olunikeza isifinyezo nokubukeka okulinganiselwe, kepha lokho kuzosivumela ukuthi sishintshe imikhakha ngokushesha.
Isibikezelo sezulu (okwamanje asihunyushelwe kahle kusi-Spanish)
Thola imodi yefoni
Isilawuli kude sekhamera
Isikhumbuzi Sokugcwalisa Inhloso Yesinyathelo Sansuku zonke
Idivayisi inokumelana kwamanzi kwe-IP68, Yize ingakhelwanga ukubhukuda nayo, izomelana nokuchaphazeleka okuyisisekelo, ngakho-ke izomelana nokuqeqeshwa kwethu ngaphandle kwenkinga.
Sine, njengoba sishilo ngaphambili, isongo elifuna ukuba yiwashi. Isikrini sinokuklanywa kwesikwele okukhudlwana kunokujwayelekile, kepha imisebenzi ayidluli kulokho okunikezwa enye intengo, iXiaomi Mi Band 6. Uma ufuna idivayisi enobuhle bokubuka nokusebenza okuyisisekelo, Ngama-euro angama-50 abizayo, kunezindlela ezimbalwa ongakhetha kuzo njengeRealme Watch 2.
Kuthunyelwe ku: 6 de julio de 2021
Ukulungiswa kokugcina: 5 de julio de 2021
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Gadgets » SmartWatch » I-Realme Watch 2, indlela esezingeni eliphansi yokungena esezingeni lokugqoka
I-Huawei WiFi AX3, umzila okufanele ube nawo ukuze uthuthukise ukuxhumana kwakho